Vokatra fanondranana – Hihena ny vokatra letisy avy ao Brickaville - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Vokatra fanondranana – Hihena ny vokatra letisy avy ao Brickaville
Mety hihena ny vokatra letisy ao amin’ny distrikan’ i Brickaville noho ny hamaroan’ny fototr’ity voankazo ity nongotan’ny rivo-doza, izay nandalo tany farany teo. Fanamarihana nataon-dRakotondrahova Simon, filohan’ ny Vondron’ny mpanondrana letisy any ivelany na GEL izany. ”Na eo aza ny mety ho fihenan’ny vokatra avy amin’ny distrikan’i Brickaville dia azon’ny vokatra avy amin’ny faritra Atsimo Atsinanana sy Analanjirofo ary ny faritra hafa fenoina tsara izany, fa be ny vokatra any amin’ireo faritra hafa”, hoy ny filohan’ny GEL, izay nanipika fa hatramin’izao dia mbola i Madagasikara no mpamokatra ity karazam-boankazo ity be indrindra eran-tany.
”Nisy fihaonanay mpandraharaha sy mpanondrana letisy ary ny minisiteran’ny Varotra tamin’ny fiandohan’ ity volana aogositra ity. Nodinihinay tamin’izany izay handaminana ny fiotazana sy fanangonana ny vokatra amin’ity taona ity”, hoy ihany Rakotondrahova Simon. Nampitaraina ny mpanondrana azy ny tsy fahafahan’izy ireo mametra ny vidiny eo amin’ny tsena hatreto aloha.
Fiahiana sosialy – Mba hahazo fisotroan-dronono ihany koa ireo tantsaha(0)
Ela ny ela ka ho isan’ireo hahazo tombontsoa amin’ny fiahiana sosialy omen’ny CnaPS na ny Tahirim-pirenena momba ny fiahiana sosialy ihany koa ny tantsaha. Nanao sonia fifanarahana ny CnaPS sy ny Tranoben’ny Tantsaha, tamin’ny faran’ny herinandro teo, fa manomboka izao, dia ho afaka mirotsaka ho mpikambana amin’ity rafitra ity koa ny Tantsaha (mpamboly, mpiompy sy
Fanondranana, Mpanoratra Rijakely, 20.08.2012, 14:27	FIARAHAMONINA